IZIQITHI ZEKHITSHI EZINEMIQOLO - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iziqithi zeKhitshi ezinemiqolo
Iziqithi zeKhitshi ezinemiqolo
Apha ngezantsi sabelana ngokuyilwa kweziqithi zasekhitshini ngeekholamu kubandakanya iindlela zokuyila zokulungisa kwakhona indawo yodonga usebenzisa iiplanga zenkxaso.
Omnye wemiceli mngeni emininzi ekufuneka ajongane nayo umyili wezangaphakathi kukuhamba malunga nenkxaso yolwakhiwo. Ngamanye amaxesha, iikholamu kunye nemiqadi zibekwa kwiindawo ezinobunzima kangangokuba kwenza ukuba kube nzima ukusebenza ngeenxa zonke kuyo, ukwenza iibhlokhi zezithuthi, okanye isithintelo esikhulu sokungaziva. Kodwa iikholamu kunye nemiqolomba yinkxaso yolwakhiwo esingenako ukuyisusa ngaphandle kokonakalisa ingqibelelo yesakhiwo-eyona nto sinokuyenza kukuqinisa inkxaso ukuze sikwazi ukususa enye, okanye zama nje ukuyila indlela yakho ejikeleze yona (leyo lolona khetho lukhuselekileyo).
Zininzi iindlela zokusebenza malunga nekholamu ebekwe ngendlela engathandekiyo kuxhomekeke kwisikhundla sayo. Kuba amakhitshi ahlala ebekwe ecaleni kweekona okanye imiphetho yendlu, ihlala iyindawo eneekholamu zenkxaso. Umyili olungileyo uya kuba nakho ukwandisa indawo ngaphandle kobukho bekholamu. Banokuyifihla ngeendlela ezahlukeneyo zokugcina ezakhelweyo, okanye bayenze ibe yinxalenye yoyilo.
Rhoqo umnini khaya uya kufuna ukulungisa kwakhona indawo evaliweyo kwindawo yeglasi ekhitshini kunye nokwenza uyilo lwesicwangciso esivulekileyo. Iiplanga zenkxaso zinokunika igumbi ngenkxaso ngaphandle kwemfuneko yokuqhuba umqadi obiza kakhulu kwisithuba, esinokugcina amawaka eedola kubunjineli kunye neefizi zokwakha kwinkqubo.
Ukucoca ilokhwe yomtshato kunye nokulondolozwa kufutshane nam
Umzekelo ongentla ubonakalisa Isiqithi sekhitshi yesiqhelo enekholamu esembindini enyukela eluphahleni. Ukunika umbono wolingano macala, baqinisekisile ukuba ikholamu iya kuba kwiziko lobunzulu betafile. Isidumbu sesiqithi sasekhitshini emva koko sakhiwa sajikeleza ikholamu emhlophe, esongeza inkxaso encinci.
Isiqithi seKhitshi esineeKholamu kuKhokelo
Enye indlela yokufihla iikholamu zakho kukuyithelekisa nekhitshi okanye isitayile sodonga ukuze kubonakale ngathi yinxalenye yoyilo kwaye ayisiyonto yokwakha. Unokwenza oku ngokusebenzisa i-paneling, okanye ipeyinti elula ehambelana nodonga, iikhabhathi okanye ii-countertops ziya kunceda ukudibanisa kuyilo lwekhitshi lakho. Ungafumana Isoftware yoyilo ekhitshini ukunceda ukubeka uluvo lwakho ngokusekwe kubungakanani besicwangciso sakho somgangatho kunye nezixhobo, ukugqiba kunye nekhabhathi oyifunayo.
Kuba eli khitshi linolwakhiwo lwasekhaya olunesimbo esineenkcukacha zekhabinethi eneenkcukacha, ikholamu ekupheleni kwesiqithi sasekhitshini yayinxitywe ngepeyinti emhlophe ukutshatisa iikhabhathi ezisetyenziselwa ukufihla indawo yokugcina izinto kunye nefriji. Isiphumo kukuba ikholamu ijongeka ngakumbi njengendawo ebekwe apho ngenjongo endaweni yekholamu ebekwe ngendlela engeyiyo.
Eli khitshi lesitayile selizwe lineekholamu ezimbini ezinkulu ezibekwe phakathi kwegumbi lokuhlala kunye nekhitshi. Ngenxa yobukhulu bayo, isiqithi eside sekhitshi kwicala elijonge indawo yokuhlala siya kuba nekholamu enye ibethelwe kanye embindini wobude bayo. Ukuze ingakhange ibonakale ingekho ndawo, isiqingatha esisezantsi sekholamu sasinxitywe ngamaplanga agqityiweyo ngombala ofanayo we-rustic slate osetyenziswa kwiikhabhathi zekhitshi zesiqithi.
Le khitshi kunye nendawo yokutyela iya kujonga imizi-mveliso yanamhlanje kunye nezinto ezibonakalayo zesakhiwo njengenxalenye yoyilo lobugcisa. Ngenxa yoku, uya kubona isilingi esivelileyo esineemitha zekhonkrithi ezibalekayo kunye nokungenisa umoya kungena ngaphaya kwesilingi, kunye nemibhobho yombane yezibane. Ikholamu emxinwa yenkxaso ihleli ecaleni komda wesiqithi sekhitshi, esaphindeka kabini njengodonga kwicala lesiqithi sasekhitshini. Ngombulelo, ibekwe esiphelweni sesiqithi sekhitshi ke isebenza ngakumbi njengodonga hayi isithintelo esikhulu.
Lo ngomnye umzekelo wokusetyenziswa kwepaneli kunye nokubumba ukufihla ubukho beekholamu zenkxaso. Iikholamu ezimbini ezifanayo ekhitshini zixhasa isilingi kodwa zithintela ukubekwa kwesiqithi sekhitshi. Ukusebenza ngeenxa zonke, ikhawuntari yebha yongezwa kwicala elingaphambili lesiqithi sekhitshi ukufihla isiqingatha esisezantsi sekholamu, ngelixa ikholamu eseleyo, ukubumba kuye kongezwa ukuhambelana nesitayile sekhabhathi yekhitshi.
Iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomdibaniso ngokudityaniswa kwendalo kwe-Oak kunye nokupeyinta okuluhlaza okwahlukileyo kunika eli khitshi ilizwe lakudala ukuba lizivale. Ifana nezinye iisampulu zasekhitshini, le ineekholamu ezi-2 ezinkulu ezinqumlayo Isiqithi sebeadboard ekhitshini . Kodwa endaweni yokusebenzisa iipaneli ukufihla iiposti, isebenzisa ifeksi yokwakhiwa kwamatye kwiikholamu ukomeleza ukuziva kweklasikhi ekhitshini.
Eli khitshi liphefumlelweyo lePhondo laseFrance elihamba nekhrimu elula kunye nombala ongwevu wokukhanya okukhanyayo kunye nokutsha okugqibeleleyo kwindawo encinci yekhitshi. Ikholamu enye inqamleza ikhawuntara yesiqithi, kodwa endaweni yokuncamathisela isiqithi sekhitshi esine-rectiline kwikholamu, iphinda ithumele i-engile yesiqithi, yenza ikhawuntara yesiqithi esimile ngokungaqhelekanga esusa ingqalelo yakho kwikholam.
Imidlalo yokuhlamba yomtshato yamaqela amakhulu
Eli khitshi linendlela eyodwa kwiikholamu zolwakhiwo. Endaweni yokugcina umilo wayo oqhelekileyo wesikwere kwaye uwusongele ngeepaneli zomthi okanye ngamatye / iithayile, bongeze i-gypsum cladding kwikholamu kwaye bayandisa, ibenza babonakale njengodonga olwenza isiqithi sekhitshi ngabom.
Indawo yekhitshi yangoku ebonisa ucoceko, imigca ye-rectilinear kunye nokugqitywa komthungo. Indawo yekhitshi inkulu kakhulu, nangona kunjalo, ikholamu enkulu ilungile embindini wekhitshi. Endaweni yokuba ngumqobo, nangona kunjalo, umyili uyisebenzisile ukwahlula ikhitshi kwiindawo ezimbini-indawo ephambili yokulungiselela ukutya kunye nendawo yebha eyindawo encinci eyenziwe yikholamu.
Uyenza njani indawo yeziqhamo
Ikholamu ebanzi ime kanye embindini wale ndawo incinci yasekhitshini. Ngenxa yobubanzi bayo obubanzi kunye nokubekwa ngendlela engathandekiyo, umyili wayisebenzisa njengodonga apho ikhawuntari encinci yesiqithi yayiza kudityaniswa khona, ukwenza indawo encinci yokutyela ngefestile. Isiqithi ngokwenyani si usingasiqithi wasekhitshini uyilo olunodonga oluxhasayo endaweni yekholamu nganye okanye umqadi.
Isiqithi seKhitshi esineeKholamu zeNkxaso
Ngokuphakama okukhulu kwesilingi okufumanekayo, eli khitshi lesicwangciso livulekileyo linemvakalelo entsha kunye nomoya. Ngenxa yemfuneko yeekholamu, umyili uyidibanisile kuyilo ngokulufaka nge-white-paint paint slats to match the cabinets kitchen. Ezi ntsika zimbini zibonakala zahlulahlula ikhawuntari enkulu yesiqithi ukuba ibe ngamacandelo amabini - elinye lilungiselelwe ukutya kwaye elinye lelokutya.
Iinkcukacha zokwakha iinkuni ngaphakathi ngaphakathi ngokuqinisekileyo yindawo ekugxilwe kuyo, ke indlela yoyilo yeli khitshi ayizimiselanga ukufihla iikholamu kunye nemiqadi nangayiphi na indlela, kodwa endaweni yoko iyisebenzisa njengenxalenye yoyilo. Iikholamu zemvelo ezenziwe ngomthi kunye nemiqadi ziyekwe zavezwa kwaye zisebenza njengeentsika zekona zesiqithi esikhethekileyo esimise okwe-U.
Enye indlela eyahlukileyo yokufihla iikholamu kukusebenzisa ukufakwa kweenkuni ukuziguqula njengezakhelo zeminyango. Kulo mzekelo, izithuba zeekholamu zazingqamene kakhulu, yiyo loo nto ke kwakusenziwa inkohliso yeengcango ezi-3 ezixhonyiweyo / iiarchways. Ukugqitywa kwepeyinti emhlophe kufana nekhabhathi emhlophe yekhitshi ngokugqibeleleyo ukuze kungakhange kubonakale kungekho ndawo kuyilo lulonke.
Izithuba ezibini zomthi zixhasa imiqadi yeplanga eyenziwe yile khitshi. Ngenxa yokuba isithuba sigcina esi sitayile se-baroque ngobuhle, sigcina umgangatho kunye nezitena zodongwe. Imiqadi yeenkuni yongeza kwi-aesthetics ye-baroque njengoko igcina ukugqibezela kwayo, kugcwalisa umgangatho wezitena kunye nokugqitywa kwe-weathered kwikhabhinethi. Oku ikhitshi yesiqithi esiphindwe kabini ubeko lune siqithi esiphakathi sokulungiselela ukutya kunye nesiqithi esikhudlwana esinendawo eyongezelelweyo yokubala, isinki eyakhelwe-ngaphakathi, ifriji yewayini kunye nebha yesidlo sakusasa ephezulu.
Kule nto ikhitshi lesicwangciso esivulekileyo, yikholamu enye emxinwa eyayibekwe ecaleni komjikelezo wayo yenza ukuba kube lula ukuyila kuyo. Ikholamu encinci inqumla kwikona engaphandle kwesiqithi esikhulu sekhitshi, kwaye ihambelane nokugqitywa okumhlophe okumhlophe kwetheyitile yayo, kunye nolunye udonga kwisithuba, ukuyenza idibane ngaphandle komthungo kwisithuba. ndwendwela eli phepha ukubona ngakumbi iikhitshi zomqondo ovulekileyo .
ucango lwepantry endala
iilokhwe zomtshato ezingaqhelekanga zomtshato wesibini
Umama wezinwele zomyeni
Utatazala izipho zomtshato
Ngaba uzisa isipho kwitheko lokuzibandakanya
uluhlu lwengoma yomtshato ka-dj